Ducadii Shacabka Gobolka Sitti Oo La aqbalay - Cakaara News
Ducadii Shacabka Gobolka Sitti Oo La aqbalay
Sitti (Cakaaranews) Sabti, 16ka April 2016. Sida lawada ogsoon yahay waxaa gobolka Sitti kajirtay abaar ay keentay isbadalka cimilada aduunka. Taas oo saamayn kuyeelatay guud ahaanba noolaha gobolka sitti dad iyo duunyaba iyadoo xukuumada federalka iyo ta deegaankuba ay si joogta ah taageero nooc walba ah ula garab taagnaayeen shacabka iyo duunyada gobolka hadh iyo habeenba. La’aantoodna ay abaartaasi dhibaato ba’an keensan lahayd.
Waxaana xusid mudan in mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada dalka oo uu horkacayo mudane raisal wasaare Hailemariam Desalegn uu kulan wadatashi ah layeeshay bulshada gobolka si uu ugala qaybqaato una darso xaalada saamaynta abaarta.
Dhanka kalana, waxaa lama ilaawaan ah taariikhdana baal dahab ah kagashay in mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada deegaanka oo uu horkacayo mudane madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ay tunkooda ugu xamaaleen shacabka gobolka iyo waliba in gudiyada abaaraha heer fedearaal iyo heer deegaan isugu jira oo uu hogaaminayo Mw-kuxigeenka ahna wasiirka xafiiska hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar ay udhaxeen qabalee kasta oo kamid ah gobolka. Taasi oo cadaynaysa sida ay xukuumada iyo xisbigaba uga go’an tahay waxqabadka u adeegida shacabka iyo kadamqashada baahida dadwaynaha.
Hadaba, gaar ahaan shacabka gobolka sitti guud ahaana shacab-waynaha deegaanka ayaa sida diinteenu dhigayso gacmaha kor utaagay oo ilaahay kabaryay inuu abaarta kadul-qaado. Ilaahayna ducadoodii wuu ka aqbalay oo waxaa baryahanba gobolka sitti si isdaba-joog ah uga’aya roobab mahiigaan ah hadh iyo habeenba. Waxaana meel walba wadhan baliyada biyaha oo rahu kadhex qaylyayo iyadoo roobabka Gugu ay kacurteen dhamaanba deegaanka.
Ugudanbayna, mw kuxigeenka ahna wasiirka xafiiska hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdixakiin Cigaal ayaa sheegay in Shacabka gobolka sitti uu si gaar ah oo ay farxadi kudheehan tahay ugu naaloonaya nimcada roobabka uu ilaahay siiyay maadaama oo uusan sanadahan roob u di’in. waxayna kuxamdiyayaan ilaahay maadaama ducadoodii uu aqbalay iyagoo waliba mahad balaadhan oo gaar ah u celinaya waxqabadyadii kaladuwanaa ee xukuumada dalka iyo ta deegaanka ee aysan ukalahadhin.